Termux, chishandiso uye chinouraya emulator yeApple neLinux | Linux Vakapindwa muropa
Termux inogumisa emulator yeApple zvishandiso uye chishandiso paLinux Inoshanda yakanangana pasina kudiwa kwekuwana midzi kana yakakosha kumisikidzwa.
Mu Termux mamwe mapakeji anowanikwa kuburikidza neAPT package maneja. Chinangwa chikuru chemugadziri ndechekuunza iyo Linux raini yekuziva ruzivo kune vashandisi vezvigadzirwa zvemidziyo vasina kuwanda kwemusoro uye Termux yakafumiswa nehukuru hwakakura hwezvishandiso.
Mu Termux zvese zvaisanganisira mapakeji anovaka ne = Android NDK uye ivo vanongo gadzirisana chete kuti vaite kuti vashande paApple.
The operating system haina kupa kuzara kuzere kune ako mafaera masystem, saka Termux haigone kuisa mafaera epakeji mune akajairwa madhairekitori senge / bin, / etc, / usr kana / var. Asi, mafaera ese akaiswa mudhairekitori rekunyorera iri mu "/ data/data/com.termux/files/usr".
Kuti zvive nyore, dhairekitori iri rakatumidzwa zita "chivakamberi" uye rinowanzo kuve "$ PREFIX", inova zvakare nharaunda inoshandurwa kutumirwa kune iyo Termux shell.
Nezvo zvataurwa, mushambadzi anonyevera kuti dhairekitori iri harigone kuchinjwa kana kuendeswa kukadhi re SD nekuda kwezvikonzero zviviri zvikuru.
Kutanga, iyo faira system inofanirwa kutsigira Unix mvumo uye akakosha mafaera sezviratidziro zvekufananidzira kana zvigadziko uye chepiri, nzira inoenda ku "prefix" dhairekitori yakaoma -kodhi mune zvese mabhainari.
Izvi ndizvo zvimwe zvezvinhu zvikuru uye mashandiro akataurwa nemunyori weTemux:
Inishuwarenzi: Iwe unogona kuwana maseva ari kure uchishandisa OpenSSH ssh mutengi. Termux inosanganisa yakajairwa mapakeji neakakodzera terminal emulation mune inoratidzika yakavhurika sosi mhinduro.
Yakabatanidzwa mabasa: une sarudzo yekushandisa Bhash, hove kana Zsh uye nano, Emacs kana Vim; pinda maSMS mubhokisi rako rekuyera, pinda zviteshi zveAPI zvine curl, uye shandisa rsync kuchengetedza makopi ekuchengetedza erunyorwa rwekutsvaga pane iri kure server.
Yakasarudzika: Huwandu hukuru hwemapakeji hunogona kuiswa kune iyo system nerubatsiro rweanozivikanwa APT package manejimendi kubva kuDebian neUbuntu.
Zvinotsvaga: mapakeji anowanikwa muThemux akafanana neaya eMac neLinux. Unogona kuisa mapeji emurume pafoni yako woaverenga muchikamu chimwe chete uchiedza nawo mune imwe.
Mabhatiri anosanganisira: Termux yaisanganisira yakagadziridzwa vhezheni dzePerl, Python, Ruby, uye Node.js.
Yakayerwa: unogona kubatanidza bluetooth keyboard uye wobva wabatanidza chishandiso kune yekunze kuratidza kana zvichidikanwa, Termux inotsigira mapfupi ekhibhodi uye ine yakazara mbeva rutsigiro.
Kunze kweiyo faira system, kune mamwe mutsauko neyakajairwa Linux kugoverwa, saka Termux haifanire kuvhiringidzwa nekuparadzirwa. Muchokwadi, kunyangwe ichipa package ecosystem yakafanana neLinux kugoverwa, iwe unofanirwa kuziva kuti Termux ingori chiito chinowanzoitika chinomhanya paApple.
Zvese zvakaiswa mu $ PREFIX uye kwete mune akajairwa madhairekitori senge / bin kana / etc.
Iyo nharaunda ndeimwe-mushandisi, saka chenjera neizvi kana uchimhanya mirairo semidzi, sezvo ichigona kukanganisa SELinux (Security-Enhanced Linux) tag uye mvumo.
Termux inoshandisa imwechete libc (yakajairwa C mutauro raibhurari) uye yakafanana simba chinongedzo seiyo Android inoshanda sisitimu.
Zvinoenderana newebsite yeTemux, aya matatu mutsauko mukuru anokonzeresa matambudziko kana kuyedza kumhanyisa mapurogiramu akaunganidzwa kune akajairwa GNU / Linux system.
Chekupedzisira, Termux's GitHub peji inocherekedza kuti emulator haisi kunongedza ikozvino Android 10 (API 29) nekuda kwekuchinja kwakawanda kunoitwa neshanduro iyi yeanoshanda system.
"Maitiro asina kuvimbika anotarisana neApple 10 haigone kukumbira exec () pane mafaera ari mune dhairekitori remba reapplication. Kuitwa kwemafaira kubva kudhairekitori repamusha rekushandisa pakunyora kutyora W ^ X. Zvikumbiro zvinofanirwa kungoisa kodhi yebhainari yakaiswa mufaira reAPK, "Google inoshuma paAPI 29.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Free Software » Termux, application uye terminal emulator yeApple neLinux
An app iyo yakakosha kwandiri, iri muF-Droid :)
Pindura kuna Kaini
Endless OS 3.9 inouya neKernel 5.8, Gnome 3.38 uye nezvimwe